Ny politikantsika manokana - Easy Multi Display - Rindrambaiko Digital Signage
Voaro ny data
Politika manokana momba ny tsiambaratelo ho an'ny Virtual Cockpit UK LTD
Ao amin'ny Easy Multi Display, azo alaina ao amin'ny www.easy-multi-display.com, iray amin'ireo laharam-pahamehana zaridaintsika ny fitsidihan'ny mpitsidika anay. Ity antontan-taratasy momba ny fiainana manokana ity dia ahitana karazana fampahalalana izay angonina sy noraketin'ny Easy Multi Display sy ny fomba fampiasana azy.
Raha manana fanontaniana fanampiny ianao na mitaky fampahalalana bebe kokoa momba ny Politikanay momba ny tsiambaratelo, aza misalasala mifandray aminay amin'ny alàlan'ny mailaka ao amin'ny support@easy-multi-display.com.
Raha te hahafantatra ny atao hoe politika momba ny tsiambaratelo ianao dia afaka mijery ilay lahatsoratr'i wikipedia.
Ny Easy Multi Display dia manaraka ny fomba fanao amin'ny fampiasana rakitra hazo. Mandefa mpitsidika ireo mpitsidika ireo rehefa mitsidika tranokala izy ireo. Ny orinasam-pifandraisana rehetra dia manao izany ary ampahany amin'ny fampiantranoana serivisy fampiantranoana. Ny fampahalalana nangonin'ny rakitra hazo dia misy ny adiresy Internet protocol (IP), karazana navigateur, Mpanome tolotra Internet (ISP), daty ary fotoana fanaovana azy, pejy / hilazana / fivoahana pejy, ary mety ho ny isan'ny tsindrio. Ireo dia tsy mifamatotra amin'ny fampahalalana izay azo fantarina manokana. Ny tanjon'ny fampahalalana dia ny famakafakana ny fironana, ny fitantanana ny tranokala, ny fijerena ny hetsiky ny mpampiasa amin'ny tranokala ary ny fanangonana ny mombamomba ny demografika.
Toy ny tranokala hafa, Easy Multi Display dia mampiasa 'cookies'. Ireto cookies ireto dia ampiasaina amin'ny fitehirizana fampahalalana ao anatin'izany ny safidin'ny mpitsidika, ary ny pejy ao amin'ilay tranokala nalehan'ny mpitsidika na notsidihin'ny mpitsidika. Ny fampahalalana dia ampiasaina handrosoana ny traikefan'ny mpampiasa amin'ny alàlan'ny fampifanarahana ny atin'ny pejinay pejin'ny tranokalan'ny mpitsidika sy / na fampahalalana hafa.
Azonao atao ny manadihady ity lisitra ity hahitanao ny politikan'ny tsiambaratelo ho an'ny tsirairay amin'ireo mpiara-miombona dokambarotra amin'ny Easy Multi Display.
Ny politika momba ny tsiambaratelon'ny Easy Multi Display dia tsy mihatra amin'ny mpizatra na tranokala hafa. Noho izany, manoro hevitra anao izahay handinika ny politika momba ny tsiambaratelo isan'ireto mpizara doka fahatelo ireto raha mila fampahalalana bebe kokoa. Mety ho ny fanaon'izy ireo sy ny torolàlana momba ny fomba hisafidianana ny safidy sasany. Azonao atao ny mahita lisitra feno momba ireo Politika momba ny tsiambaratelo sy ny rohy eto: Links pélique privé. Azonao atao ny misafidy ny tsy hampiato ny mofomamy amin'ny alàlan'ny safidinao manokana. Raha te hahalala vaovao misimisy kokoa momba ny fitantanana cookie dia mety ho hita any amin'ireo tranokala misy ireo mpizara. Inona no atao mofo?
Ny ampahany iray amin'ny laharam-pahamehana eto dia ny fampidirana fiarovana ho an'ny ankizy mandritra ny fampiasana Internet. Mamporisika ny ray aman-dreny sy ny mpiambina izahay hitandrina, handray anjara ary / na hanara-maso sy hitarika ny hetsika an-tserasera. Easy Multi Show dia tsy manangona fahalalana tsy azo fantarina manokana avy amin'ireo ankizy latsaky ny 13 taona. Raha mieritreritra ianao fa nanome izany karazana fampahalalana izany tao amin'ny tranokalanay ny zanakao dia manentana mafy anao izahay hifandray aminay avy hatrany ary hanao ny ezaka tsara indrindra ataontsika izahay. esory haingana avy ao amin'ny firaketantsika ireo fampahalalana toy izany.
Ity Politika momba ny fiainana manokana ity dia mihatra ihany amin'ny hetsika ataonay amin'ny Internet ary manan-kery ho an'ny mpitsidika ny tranokalanay momba ny fampahalalana izay nozarain'izy ireo sy / na fanangonana ao amin'ny Easy Multi Display. Ity politika ity dia tsy mihatra amin'ny fampahalalana rehetra voaangona an-tserasera na amin'ny alàlan'ny fantsona ankoatra ity tranokala ity.
Misy fanontaniana hafa ve?
Raha mbola manana fanontaniana momba ny politika momba ny tsiambaratelo Easy Multi Display ianao dia mifandraisa amin'ny serivisy ho an'ny mpanjifa support@easy-multi-display.com. Faly izahay manampy anao!